सत्ता गठबन्धन « Nagarik Khabar
Tag: सत्ता गठबन्धन
मन्त्रिपरिषद् विस्तार दसैँअघि असम्भव !
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन आवद्ध दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया लम्बिएको छ । बुधबार बसेको गठबन्धन दलका नेताहरूको बैठकमा दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिएको बताइए पनि नेकपा
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुअघि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालयको मोटामोटी भागबन्डा मिले पनि केही विषयमा अझै कुरा मिलाउन बाँकी रहेकाले बैठक बस्न लागेको
आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरु आन्तरिक तयारीमा
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मन्त्री छानिसकेको छ भने भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता बिहानदेखि मन्त्रीको सूची तयार पार्न जुटेका
मन्त्रिमण्डल विस्तारः सत्ता गठबन्धन भागवण्डामै अल्झियो
काठमाडौं । सरकारले सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलहरूलाई सहज हुने गरी कानुनी जटिलता हटाए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गाँठो अझै फुकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा समझदारी
सत्ता गठबन्धनमा अझै मन्त्रालय भागवण्डामा किचलो, कुन मन्त्रालय कसलाई ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ दलहरुसँग मन्त्रीको नाम मागेका छन् । तर, दलहरुबीच मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागेपनि अहिलेसम्म कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन । महत्वपूर्ण
सत्ता गठबन्धन बैठक : मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न अध्यादेश निष्कृय पार्न प्रधानमन्त्रीलाई दवाव
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल भएको छ । अब चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नेबारे दलहरुबीच सहमति बनेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारअघि दल विभाजनसम्वन्धी अध्यादेश निष्कृय पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर
सत्ता गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो, भोलि पुनः बस्ने
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत विषयमा छलफल गर्न बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बेलुकी बसेको बैठक बिना कुनै निष्कर्ष सकिएको हो ।
सत्ता गठबन्धनले एमालेसँग वार्ता गर्ने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर रुपमा संसद अवरुद्ध पारेपछि सत्ता गठबन्धन दलहरुले एमालेसँग वार्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले
सत्ता गठबन्धनबीच ‘गनगन’, दर्जनौं बैठक बस्दा पनि निर्णय ‘शून्य’
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलको बैठक हरेक दिनजसो बस्दै आएको छ । देश र जनतालाई निकास दिने विषयभन्दा पनि आन्तरिक गनथनमै सत्ता गठबन्धन दल रुमलिएको स्पष्ट भएको छ । आन्तरिक
सत्ता गठबन्धन दलको बैठक सकियो
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलको बैठक सकिएको छ । १० बजेदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक केहीबेरअघि सकिएको हो । विशेषगरी संसद बैठकबारे रणनीति बनाउन तय गर्ने विषयमा बैठकमा